March 2009 – Everybody Read TChen
အင်းဒိုင်ယာရီ မရေးတာ တော်တော်ကြာသွားပြီ
ဆေးရုံတက်ရခါနီးကတခါ တကယ်တက်ရတာတခါ ဖြစ်ဖူးတယ် ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ပါ
၂၀၀၃ လောက်က အိုအိုင် OIs (Opportunistic infections) လို့ခေါ်တဲ့
အခွင့်အရေးယူဝင်ရောက်လာတဲ့ရောဂါများ ဆိုတာတွေ ကြောင့် ကိုယ်သေမလို တခါ ဖြစ်ဖူးတယ်
ဆရာဝန်က ဆေးရုံတင်ခိုင်းတာ ကိုယ်က အိမ်မှာပဲသေမယ် ဆိုပြီးပေနေတာ
မသေခဲ့ဘူး သေမင်းကလက်မခံသေးလို့ ကိုယ်တခါ ပြန်လာပြန်တယ်
နောက်တခါ က ၂၀၀၅ မှာ မှတ်မိနေသေးတယ် မတ်လ ၁၁ ရက်ပေါ့
ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုခွဲရတယ်လေ ခြေခုံမှာ- Ex P. TB (Extra Pulmonary Tuberculosis) အလွယ်ခေါ် အဆုတ်ပြင်ပ တီဘီလေ အဲဒီတုံးက ဆေးရုံကို ၃ ပတ်လောက်တက်ရတာ ကြည့်မြင်တိုင် အရိုးဆေးရုံမှာ ခိခိ ပိုက်ဆံမှမရှိတာနော် အကောင်းစားဆေးရုံကိုတက်ဖို့က
ဒီတခါ ဆေးရုံတက်ရရင် အင်တာနက် အက်စက် internet access ရှိတဲ့ ဆေးရုံမှာတက်ချင်တယ်လို့လေ
အရင်တခါ တုံးက တော့ ပျင်းနေရတယ် တနေ့တနေ့ စာဖတ် ထမင်းစားအိပ် ပေါ့ ဘေးကုတင်က
ကောင်လေး ကို သွားသွားအားပေးတာပေါ့ သူက သနားပါတယ် ၁၉ နှစ်ပဲရှိသေးတာ
သူ့ဘ၀ ရဲ့အချိန်တော်တော်များများ ဆေးရုံပေါ်မှာ ဖြတ်သန်းနေရရှာတာ ကိုယ်နဲ့စခင်တော့ သူဆေးရုံတက်ရတာ ၃ နှစ်ရှိနေပြီ တက်လိုက်ဆင်းလိုက် နဲ့ အော်ပရေးရှင်းကလဲ ၃ ခေါက် လုပ်ထားတယ်
သူလဲ Ex P. TB (Extra Pulmonary Tuberculosis) ပဲဖြစ်တာ သူကကျော မှာဆိုတော့ ပိုဆိုးတယ်လေ
ပြောချင်တာက အဲမှာ ဆေးရုံတက်တုံးက စာရေးဖြစ်တယ်
ကိုယ် တရုတ် ၀တ္ထု တအုပ်ကို ဘာသာပြန်တာ အခန်း ၆ ခန်း မှာ ၃ ခန်းလောက်ပြီးထားတယ်
နောက်တခါ ဆေးရုံတက်ရရင် ကျန်တာဆက်ပြန်မယ်လို့တေးထားတယ် အဲဒါကြောင့်ပြောတာ
ဒီတခါ ဆေးရုံတက်ရင် အင်တာနက်ပါတဲ့ဆေးရုံမှာပဲတက်မယ်လို့ ဘလောခ် လဲရေးမယ်
ရနိုင်ရင်တော့ လာဗင်ဒါး လေးတွေ လိုချင်တာ မမကျွန်း ရှင်လာတဲ့နေရာမှာရှိလောက်တယ် ရှာယူခဲ့ပေးနော်
ခုလောလောဆယ် တော့ ဆေးရုံတက်ချင်နေတယ် ကိုယ်နေမကောင်းဘူး (စိတ်လေ ကျနေပြန်ပြီ)
အဖြူရောင်သံစဉ်ရေဒီယို မှာ သီချင်းတောင်းပေးတာ
သီချင်းနာမည် သိချင်လားမပြောပြဘူး သူ့သွားမေးကြ
ဧပရယ် ၁ ရက်နေ့
Posted on March 31, 2009 February 7, 2018 Categories diary, Uncategorized, Uncategorized10 Comments on တီချမ်း နဲ့ ဆေးရုံ
တီ ချမ်း ၏ ချစ်သူများ………………….
ဒီမနက် တီ အစောကြီးနိုးပါတယ် အဲဒါမနေ့ညက တင်တဲ့ ပိုစ့် ကိုပြန်ကြည့် ရင်း လက်က ဘောပင်ဆီရောက်သွားတယ်
ဘေးမှာ ရှိတဲ့စာရွက်ကို ခေါက်လိုက်တယ်
ပြီးတော့ ဒေါ်ရီတာ နဲ့ က စကားပြောလက်စဆိုတော့ သူ့အကြောင်းအရင်ဆုံးခေါင်းထဲရောက်လာတယ်
နောက်တော့ လက်က ဦးနှောက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ သူ့ဘာသာ အလုပ်လုပ်သွားတော့ တာပဲ
လက်ရေးက သိပ်မလှတော့ အောက်မှာပြန်ရိုက်ပေးလိုက်တယ်နော်
တခါတလေ လဲ ကွန်ပျူတာနဲ့ရေးပါတယ် ဒါပေမယ့် လက်နဲ့ရေးရတာ ပိုအားသာတယ် အဲလို အဲလို
ပြီးတော့ တီ က မကောင်းတာတခု က ဟိုတစ ဒီတစ လျောက်ရေးတတ်တာပဲ
အရင်က ရေးထားတာလေးတွေလဲ အဲလိုနဲ့တိုလီမွစလေးတွေ ဖြစ်ပြီးပျောက်ကုန်တာအများကြီး
တအားစိတ်ထဲကနေ ခင်နေတဲ့ မမတွေ ဥပမာ ဦးမွန် မမကွမ် မမသီရိ
ကောင်လေးတွေ သဟသ တို့ ဖျော်မိုး မောင်ငယ် အမြဲစိမ်းဖြိုးတို့ ရှိပါသေးတယ်
ပြီးတော့ ဖြိုးမော်လေးရဲ့မွေးနေ့ မနက်ဖြန်အတွက်လဲ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်တင်ပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လေနော်
ခုက အရင်တင်ပေးတာ ဖတ်ရအောင်လို့ သမီးလေးတွေ အရင် လေဒီ ဖတ်စ် လေ နော်
တချို့သမီးလေးတွေ ကို တီ က အရင် သူတို့ ပရိုဖိုင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်
အဲဒီကနေ ရေးလို့ ရမယ့် ဟာလေးတွေယူရေးတာလေနော်
ပြီးတော့ တီ က တီ့ထက်ငယ်ရင်သမီးပဲခေါ်တတ်တာအကျင့်ဖြစ်နေပြီ
သေသေချာချာ ထည့်ကြွားတတ်တဲ့ “သူသူ”
အရွယ်လေး က ငယ်
ပန်းချီ ကိုဝါသနာပါ “နန်းညီ” ရေ က
ချစ်စရာကောင်လေးငယ် “ဖိုးစိန်” တဲ့လေး
အတွေးကောင်းတွေ ကို ကတုံးကြီးနဲ့တွေး
“ကိုရင်” နော် တဲ့လေး
“မာလာ” က ငယ်ငယ်
ညနေ ၄း၁၀ နာရီ
၃၁ ရက် မတ်လ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
Posted on March 31, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများ18 Comments on တီ ချမ်း ၏ ချစ်သူများ………………….
အင်းပြောပြရအုံးမယ် တခါသားကပေါ့ကွယ် တီ (မမကွမ်လိုပဲ) အင်္ကျီတွေ တပုံကြီး ၀ယ်ခဲ့တုံးက ၊
“မင်းအင်္ကျီတွေဝယ်ပြန်ပြီ၊ ဘာလဲ မင်းမှာ ၀တ်စရာတွေ မရှိတော့ဘူးလား? ဗီဒိုထဲကဟာတွေက ဘာတွေလဲ?” လို့ သူတခါမှမပြောခဲ့ဖူးဘူး။
အင်း…သူ့ရုပ်ရည်က လဲ သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာ တီမျက်နှာငယ်စရာလို့ တခါ မှ မခံစားစေခဲ့ရဘူး။ သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့် တီ တခါမှ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် နှစ်သိမ့် သလိုနဲ့ “ယောက်ျားတယောက်အတွက် စိတ်လှတာ လူလှတာထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်” လို့ မပြောခဲ့ရဖူးဘူး။
ပြီးတော့ သူက တီ အရင်ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရည်းစားဟောင်း ခေါင်းမာမာနဲ့အကောင် ထက် အများကြီးပိုမို တောက်ပ အရောင်လက်တယ်။
သူက ပညာလဲတတ်တယ်၊ နှာဗူးလဲမထ ဘူး။
သူက ပိုက်ဆံလဲအရှာတော်တယ် မာန်မာနလဲမကြီးဘူး သူ့ကိုယ်လုံးက လဲချွေးနံ့ နံမနေသလို၊ ချိုင်းပတ်စော်လဲမနံဘူး။
ပြီးတော့ တီ စိတ်ညစ်လို့ စကားပြောရင်ဖွင့် ချင်ရင်လဲ သူကနားထောင်ပေးတတ်တယ်၊ ပြီးတော့ တီ့ ဘ၀အကြောင်း၊ မိသားစု အကြောင်း၊ သူ့ အရင်ရည်းစားတွေ အကြောင်းပြောပြ ရင်လဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့နားထောင်ပေးတတ်တာပဲ။
တီ့ ကို သူပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေ ဆိုလို့ရှိရင်လဲ အမြဲတမ်း တီလိုချင်နေလို့ (၇) ပိုင်းလောက်သေနေတဲ့ ဟာမျိုးတွေချည်းပဲ။ သူပေးတဲ့လက်ဆောင်ကို လက်ခံ ရရှိတဲ့ အချိန်မျိုး ဆို တခါ မှ တီ က ဟန်ဆောင်ပြီး “အဲ ချစ်စရာလေးတော့ ကြိုက်လိုက်တာ” လို့ လုပ်ပြောနေစရာမလိုဘူး။ အဲလိုအဖြစ်ကလဲ အမြဲတမ်း လိုလိုပါပဲ။
ပြီးတော့ သူက တီ နဲ့ ဘုရားအကြောင်းတရားအကြောင်းလဲပြောနိုင်တယ်၊ ဟော နိုင်ငံရေးအကြောင်းလဲရ၊ သမိုင်းလာမလား၊ သိပ္ပံ လာမလား၊ အင်းနောက်ဆုံးအနုပညာပဲပြောအုံးမလား ဘာလာလာ ဒေါင်း (အဲလေ) ဘာလာလာ အကုန် လုံးစေ့ပတ်စေ့ မဟုတ်တောင် စကားဝိုင်းဖြစ်အောင်တော့ အမြဲပြောနိုင်တယ်။ နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်ကွယ် တီ တို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိန်းကလေး သဘာဝ အလှအပ ရေးရာ၊ ဖက်ရှင် က အစ ရေစီးကြောင်းမီအောင်ပြောနိုင်တဲ့သူ။ (ယောက်ျားလေး များ အဲကောင်က ခြောက်နေလို့နေမှာပေါ့လို့တွေးနေတယ် မှလား၊ ခိခိ ဒါတကယ့် လိုအပ်ချက်တွေနော် မိမိ တို့ရဲ့ ကောင်မလေး ချစ်သူ များ အပေါ် အမောင်တို့ သကောင့်သားတွေ ဘယ်လောက်အရေးထားတယ် ဆိုတာ ဒါတွေ ကိုကြည့်ပြီး တီ တို့က ဆုံးဖြတ်တာ ဟွန်း အဲတော့ အမှတ် များများ လိုချင်ရင် စာများများကျက် ခိခိ။ ။ ဤကားစာရေးသူ၏ စေတနာစကားချပ်)
တခါသားတုန်းကဆို အင်း………..တီ ၀ိတ်ချတုံးကပေါ့ (ပြန်မပြောတော့ဘူး လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာ ဒီကိစ္စ ခုတော့ သမီးလေးတို့အရေးလေ အင်းပေါ့…) သူက တီ့ ကို တခြားယောက်ျားတွေလို ဟိုဟာ ဒီဟာတွေ စားချင်လာအောင် တခါ မှ လာမမြူဆွယ်ဘူး၊ “ဒါလေး လာစားပါလား အချစ်ရယ် အရမ်းကောင်းတာ၊မင်းအကြိုက်လေ” လို့ တီ့ ၀ိတ်ချ ပရိုဂရမ် ကိုပျက်အောင်လဲ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး၊ တီ ကို “ချစ်က မ၀ နေပါဘူး၊ ချစရာမလိုပါဘူး၊ မောင်ကချစ် “၀”နေလဲ ချစ်မှာပါ လို့ လိမ်နေတာ သိသာတဲ့ စကားတွေ၊ တီ စိတ်ပျက်စေမယ့် စကားတွေ လုံးဝမပြောဘူး။
သူဟာဆိုရင် တီ့ ကို ဘယ်တော့ မှ၊ လုံးဝ “နိုး” ဆိုတဲ့ အငြင်းဝါကျ ကို မပြောရက်၊ မပြောရဲ၊ မပြောချင် သူပါကွယ်။ ဘယ်တော့ မှလဲပြောမှာမဟုတ်ဘူး။
သူမှာလေ မကောင်းတဲ့ အကျင့် ဆိုလို့ ဘာဆိုဘာမှ မရှိပါဘူး၊ ပြီးတော့
အသက်ကလဲရှည်မယ့် ရုပ်၊ တသက်လုံး တီ့ ကိုသူက စောင့်ရှောက်သွားမှာတဲ့၊ နောက်ဆုံး တီ မျက်စိ နှစ်လုံးမှိတ်သွားတဲ့အချိန်အထိပေါ့ကွယ်။ တီ့ ကိုစောင့်ရှောက်ပြီး တီ မျက်ကွယ် ပြု သွားချိန်မှ သူက တီမပါတဲ့ သူ့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဘ၀ ကို ဆက်မှာတဲ့ကွယ်။
ပြီးတော့ မပြောမပြီး မတီးမမြည် ပြောရအုံးမယ် မိန်းကလေးများကျော်ဖတ်ရန်……
တီ ဟိုဟာ ကို မလိုချင်တဲ့ အချိန် ဆို သူက လိမ်လိမ် မာမာ လေး သွားအိပ်နေတတ်ပြီး
တီ လိုချင်တဲ့ အချိန် ဆို သူက ချက်ချင်း ခုန်တက်လာတတ်တယ် အဟိ…
အခုပြောခဲ့တာတွေ အားလုံးက တီ တို့ မိန်းမတွေ လိုချင်တဲ့ယောက်ျားမျိုးပါ။ အမှန်တော့ ဒီလောက ကြီးမှာ အဲလို ကောင်းတဲ့၊ အဲလောက်ကောင်းတဲ့ ယောက်ျား မရှိလောက်ပါဘူးထင်ပါတယ်။
တွေ့ရင်လက်တို့ ကြနော် တဦးတည်းမောင်ပိုင်မစီးနဲ့ (မယ်ပိုင်လဲ မစီးနဲ့နော် ဒါပဲ မစီးနဲ့)
အဲဒီယောက်ျား က အဖေ၊ မောင်၊ အကို၊ သား၊ ချစ်သူ၊ သူငယ်ချင်း၊ ကိုယ်ရံတော် အိုနောက်ဆုံး ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဘလောခ်ဂါ မိတ်ဆွေ တွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လေနော် အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် တော့ ရချင်ရမှာပေါ့နော်။
ဒီပို့စ်လေး က တီ့ ညီမ၊ တူမ ၊မမ၊ ဒေါ်ဒေါ် တွေ ဒီလိုယောက်ျားကောင်းကောင်းလေးတွေ ရှာယူနိုင်ဖို့၊ ကြီးတော်ကွမ် (ခိခိ စတာနော် စိတ်ဆိုးရဘူး ခင်လို့ပါတော် ရပြီးရင်လဲ ထပ်ရှာယူ နောက်တယောက် ခစ်ခစ်) နောက်ပြီး တီ့ တူ၊ သား၊ မောင်၊ ကိုကို၊ ဦးဦး၊ ဘဘကြီး လေးတွေ အဲလိုယောက်ျားကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ချင်လာအောင် ကြိုးစားချင်စိတ် ရှိကြဖို့ ရည်ရွယ် တယ်လေနော်။ သားကောင်းသမီး ရတနာလေးတွေ ဖြစ်ကြပါစေကွယ်။
တီချမ်း၊ ၁၂ နာရီ ၄၆ မိနစ် ဘန်ကောက်မြို့နေအိမ်။
Posted on March 30, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး12 Comments on ယောက်ျား
အင်း လာလာမေးကြ အော်ကြပါတယ် စီပုံးမှာ
တီချမ်းဆိုတာ ဘာလဲ ယောက်ျားလားမိန်းမလား ဂေး ဆို တာ ပေါ့စတစ်ဆိုတာတကယ်လား ဘာညာပေါ့
ကဲ အခု အားလုံးကို တပြိုင်ထဲဖြေပေးလိုက်ပြီနော်
၂၀၀၆ ဂျူလိုင်တုံးက တီ့ ကို လုပ်ထားတဲ့ အင်တာဗျူးလေးပါ လုပ်တဲ့ အဖွဲ့ က အမေရိကားက အေစ့် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုတေသန လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တခုရဲ့ ကွန်မြူနတီ (ခေါ်) လူထုအခြေပြု ပရိုဂရမ်က လုပ်တဲ့
တီ တို့လို အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုး နဲ့နေထိုင်နေတဲ့ လူငယ်လေးတွေကို စုပြီး မြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့ ပရိုဂရမ်ကနေဗျူးတာပါ။ အော်ရီဂျင်နယ် က ဒီမှာပါ။
အစကတော့ တင်ရင်ကောင်းမလား မတင်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေသေးတယ်
ဒါပေမယ့် တီ က ဒီလိုလူပဲဆိုတာ ပြချင်၊ သိစေချင်တာပါ
အဲလို တင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အကူအညီ လိုတဲ့ လူတွေ ပြောပြ တိုင်ပင် ချင်တဲ့ လူတွေ တီ့ ကိုဆက်သွယ် လို့ တယောက်အကျိုးရှိရင် လဲ ၁ ယောက်ပေါ့ အဲလို စဉ်းစားတာပါ
မကြိုက်လို့ ဖတ်ပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ် ဆိုရင်တော့ လဲ ကိုယ့် ဒေါသနဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော် ခိခိ
အင်တာဗျူးက ၂၀၀၆ ကပါ အဲဒါကြောင့် တချို့အင်ဖော်မေးရှင်တွေ က အပ်ဒိတ်မဖြစ်တော့ ပါဘူး။
Posted on March 29, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီတီချမ်3း7 Comments on တီချမ်း အကြောင်းတစေ့တစောင်း…..
This is where u can be white
He can be black
I can be yellow and
She can be red
We eat Maccas and KFC
We drink coke and sprite
We used to have divas singing pop
And home boy hip hop
White rapping and
We talk about republic and democracy
And we stay sides
A man in the street corner said
“See this is what we are fighting for”
Where brothers killing each other
(Meaning: CIA and KKK as by BEP)
We have liberty monument and 911
Women weep while children sleep
The cities that have sex
Women are disposable pleasure
And where men are tissues
(You used them and you threw them away)
Love is something you chewed someone up and spit them out
And there isn’t enough room for you and your ego
(Acknowledgement: Some of the lines are from the movies I watched, the song I heard)
Posted on March 28, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် English ကဗျာများ10 Comments on America
တီ တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းသိမှတ်စရာ အချက်ကလေးတွေပါ
သူငယ်ချင်းဆီက ရတဲ့ ဖော်ဝတ်ပ်တက် အီးမေးလ်ပါ
အောက်မှာ တီ ဘာသာပြန်ထားပေးပါတယ်
တီ တို့စားတဲ့အစာတွေ ပါးစပ်ကနေ အစာအိမ်ကိုရောက်ဖို့အတွက် အချိန် ၇ စက္ကန့်ကြာပါသတဲ့
လူတယောက်ရဲ့ဆံတပင်ဟာ အလေးချိန် ၃ ကီလို (၆.၆ ပေါင်) နိုင်ပါသတဲ့ (၀ီဝီ ပွမ်ပွမ် ရက်လိုက် ပရီကောရှင်း။=။=။ မိန်းကလေး များကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်မနိုင်လျင် နံပါတ် (၃)ကိုကျော်ဖတ်ပါရန် ဖတ်ပြီးမှတီ့ ကိုရန်လာမတွေ့ရ)
ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ လိင်တံအရှည်ဟာ အကြမ်းဖျင်း သူ့လက်မအလျားရဲ့ ၃ ဆရှိပါသတဲ့
လူတွေရဲ့ ပေါင်ရိုးဟာ ကွန်ကရစ်ထက် မာပါသတဲ့
မိန်းမတွေ က ယောက်ျားတွေထက် နှလုံးခုန်တာပိုမြန်ပါသတဲ့
တီ တို့ရဲ့ ခြေထောက်တဖက်စီမှာ ဘက်တီရီယား ပိုးတွေ ထရီလီယံ လောက်ရှိပါသတဲ့
မိန်းမတွေဟာ မှန်းခြေ ယောက်ျားတွေထက် နှစ် ဆ ပိုမျက်တောင်ခတ်ပါသတဲ့
သာမန် လူတယောက်ရဲ့အရေပြား အလေးချိန်က သူ့ဦးနှောက်အလေးချိန် ရဲ့ ၂ ဆ ရှိပါသတဲ့
တီ တို့မတ်မတ်ရပ်နေတဲ့အခါ မှာ တီ တို့ ခန္ဓာကိုယ်က သမကျကျ မျှမျှတတ ဟန်ချက်ညီညီ ရပ်နိုင်ဖို့အတွက် ကြွက်သား ၃၀၀ ကျော်သုံးပါသတဲ့
တကယ်လို့များ တံတွေးက အရာတခု ကို အရည်မဖျော်နိုင်ဘူးဆိုရင် တီ တို့အဲဒီအရာကို အရသာမခံနိုင်ပါဘူးတဲ့
အခု ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့ ဘလောခ်သူ မမ၊တီတီ ဒေါ်ဒေါ် များကတော့ စာဖတ်တာ ပြီးဆုံးလုပြီဖြစ်ပေမယ့်
ဦးဦး ကိုကို ညီညီ မောင်မောင် သားသားလေးများကတော့ အခုထိ သူတို့ လက်မ ကို တိုင်းလို့မပြီးသေးဘူးတဲ့
အဟိဟိဟိဟိစိတ်ဆိုးကြနဲ့နော် ပြီးတော့ လိုက်လဲတိုင်းကြနဲ့အုံး ပြီးတော့ လူမြင်ကွင်းမှာလဲ တူညားတွေရဲ့လက်မကို ကြာကြာငေးကြည့်တာကောင်းဘူးတဲ့လေနော် ဒါပဲအောက်မှက အော်ရီဂျင်နယ်ပါနော်……….အဟစ်အဟစ်အဟစ် ရယ်ချင်နေသေးတယ် (တီချမ်းမကောင်းဘူးနော်)ခစ်ခစ်ခစ် ခိခိခိ ခွိခွိခွိ ဟားဟားဟား ဟီးဟီးဟီး အဟွင်းဟွင်းဟွင်း ငှဲငှဲငှဲ ငွီးငွီးငွီး
ချစ်ချမ်းညနေ ၄း၀၀ နာရီမတ်လ ၂၇ရက် သောကြာနေ့၂၀၀၉ ခုနှစ်ရုံးမှာခေတ္တ ဘန်ကောက် အဟစ်ဟစ်ဟစ်
Posted on March 27, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆိုက်ကိုတက်စ်, ဗဟုသုတများ16 Comments on ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းသိမှတ်စရာ
တယောက် တဗိုက် မဟုတ်တဲ့ တယောက်တပိုဒ်ပါ
မမတူးတူးသာနဲ့ တီတီချစ်ချစ်ချမ်း တို့ရဲ့ ပူးပေါင်းမှုပါ
ဆရာသွေတာဆော် ကို ဒီကဗျာလေးနဲပ ဂါဝရပြုပါတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ တော်တော် မာန်တက်သွားတယ် ဟိဟိ ငါကွလို့ ခိခိ အလကားပြောတာနော် ယုံကြနဲ့
သမိုင်းကြောင်းကို သိချင်ရင် မမတူးရဲ့ ဒီမှာ ကြည့်ကြပါတော်တို့ရေ
ဂုဏ်တင့်တယ်လေး …။ ။
၀ယ်လာတယ် Burger King
မျက်မှောင်က တင်း။ ။
အော်ရီဂျင်နယ် နဲ့ အော်ရီဂျင်နယ် ဖျက် ပါ
ဂုဏ်တင့်တယ်လေး .. ။ ။
(တောရာခွေ တဲ့ ဆရာသွေတာဆော်ပါ)
Posted on March 27, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အတွဲ ကဗျာများ7 Comments on ကျေးလက် နဲ့ မြို့ပြ
Posted on March 26, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး15 Comments on အထီးကျန် သူရဲကောင်း
Mar 24, ’09 11:24 PM
စိုးစိတ်တွေ ထုံထိုင်းသွားတယ် ……..
ဘ၀ ရဲ့အနင်းဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူး…
တိုးတိတ်ညနေ “နေ” ၀င်ရောက်သွားတိုင်း စိုးစိတ်တွေ ထုံထိုင်းသွားတယ် ……..ချစ်ဖူးလို့နွမ်းတယ်
Addy: လာတယ် မရောက်ပါဘူး……..အိမ်နံတွေကိုယ်ဖတ်ကြည့်တော့…..အမွဲချည်းပဲ။
Addy: ကလေးဘ၀ ကအသေမိုက်တယ်…..လာကျောင်းလစ်စို့တဲ့…..ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆရာမမြင်အောင်ပုန်းရတာ လောလိုက်တာ……
Addy: ဒီနေ့ညက လေတိုက်တယ်…နင်သေသွားလို့တဲ့…နင့်ကိုငါလိုက်ပို့ရတာ…..စောလိုက်တာဟယ်။
ဘ၀ ရဲ့အနင်းဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူး…ကျောပြင်ကြီးက ဆိုတယ်…ငါ့တို့ရဲ့နေ့ကတွေ ညတွေလောက်မသာယာခဲ့ဘူး……ဒီလိုနဲ့ တမိုးသောက်ခဲ့ပြန်ရော
Posted on March 25, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အတွဲ ကဗျာများ14 Comments on မမြင်ခြင်းများ ၁၊ ၂၊ ၃။ (၃ ပုဒ်တွဲကဗျာ )
ကြက်ငှက် တုပ်ကွေးဖြစ်လာရင်တယောက်ကိုတယောက် စောင့်ရှောက်ကြမယ်လို့
ကြက်၊ ငှက် တကောင်က ပြောလာရင်
ကျတော် လူလိမ် ပါလို့လာပြောရင် ဘယ်လောက်အထိယုံမလဲ
ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်နေရာမှ မလုံခြုံဘူးလို့ကျတော်ပြောရင်
ဒီတကွက် ကာတွန်းလေးက လောက ကြီးရဲ့ ကမောက်ကမတွေကို
အဲလိုပဲ ကျတော်လဲ ကြိုက်တာလုပ်တယ် လုပ်မယ်
ကြက် ငှက်တုပ်ကွေးတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လဲ ကျတော်
၂း၃၇ မနက် အာရုံ
၂၆ ရက် မတ်လ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
Posted on March 25, 2009 February 7, 2018 Categories Scattering thoughts, Uncategorized, Uncategorized3 Comments on အဖြေပေးပြီ…………….